सुखद खबर! कोरोना भाइरसका २० खोप बन्दै, कुन देशको आउला पहिला ?
काठमाडौं । कोरोना विश्वव्यापी भइरहँदा त्यस वि’रु’द्धको खोप पनि वजारमा आउने भएको छ । विश्वशक्ति राष्ट्रहरु खोपको पूर्ण परीक्षण नजिक पुगेको बताएका छन् । कतिपयलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको छ भने कतिलाई दिएको छैन । रुसले निर्माण गरेको कोरोना भ्याक्सिनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको छैन ।
विश्वका धनी र शक्तिशाली देशहरु अरबौ लगानी गरेर भ्याक्सिन बनाउन सक्रिय भएका छन् । एक पछि अर्को मुलुकले खोपको परिक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएका छन् । प्रारम्भिक परीक्षणले राम्रो संकेत देखाएपछि वैज्ञानिहरुले खोपमा पूर्ण सफलता नजिक रहेको बताउन थालेका छन् । यद्यपि यसको व्यावसायीक उत्पादन सन् २०२१ अघि भने सम्भवन नरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि जनाएको छ ।
हाल अमेरिका, चीन, रुस, भारत, अष्ट्रेलियासहित युरोपेली देशहरु समेत भ्याक्सिनको विकासमा जुटिरहेका छन् । अष्ट्रेलियाले भ्याक्सिन आयातका लागि सम्झौता पनि गरिसकेको छ । अमेरिका कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउने पहिलो देश बन्ने दौडमा छ । भारतले पनि तीनवटा भ्याक्सिन परिक्षणको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ ।
अमेरिकाले उसले भ्याक्सिनको मानव परीक्षण शुरु गरिसकेको छ । अमेरिकाको मोडर्ना थेरापेटिक्स कम्पनीले कोरोना को पहिलो मानव परीक्षण सुरु गरिसकेको छ । तर यसको पूर्ण परिणाम आउन कम्तिमा एक बर्ष लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
भारतको पुनेस्थित सेरम इन्सिटिच्युट अफ इन्डिया र अमेरिकाको कोडाजेनिक्सले संयुक्त रुपमा कोरोना को भ्याक्सिन विकासमा लागेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका थिए ।
नले कोरोनाखोप प्रकारको भ्याक्सिन विकास गरिरहेको छ । भ्याक्सिनको प्रयोग जनावरमा गरी सफल भएको दावी गरिएको छ । चिनियाँ एकेडेमी मेडिकल साइंसेजको प्रयोगशाला पशु विज्ञान संस्थानका प्रमुख किन चुआनले मंगलबार ब्रिफिङमार्फत जानकारी दिएकी छन् ।
खोप प्रकारको भ्याक्सिन मध्ये केही निकै प्रभावकारी भएको चुआनले जनाएकी छिन् । भ्याक्सिनको परिक्षण मुसा र बाँदरमा भइरहेको जाकारी उनले दिइन् ।
अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान संगठन (सिसिरो) ले कोरोना प्रतिरोधी खोपको परीक्षण शुरु भइसकेको जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनकी इमर्जेन्सी कार्यक्रमकी प्रमुख डा। मारिया भान केरकोभीका अनुसार विश्वभर २० प्रकारका खोप विकास भइरहेका छन् ।